Fanontaniana sy Valiny – Trading – FX-Consultante
Q: Aho fahaizana mpivarotra. Inona no fahalalana no mila varotra mampiasa ny system?
A: Fahalalana fototra ihany no ilaina. Ianao no mila hanokatra ny tabilao iray Sandam-bola ny mpivady. Ny sisa dia voafaritra amin'ny antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny User ny Guide.
Q: Ho I mianatra zava-baovao?
A: Ianao ho afaka hametraka mbola miandry baiko. afa-tsy, ny rafitra dia tsy mitaky ny sainy, ka ianao no afaka manokana fotoana hianarana voavonjy ny tsena sy ny fanatsarana ny fahaiza-manao Forex.
Q: Impiry no mandefa ny rafitra famantarana? Ho foana Mila mipetraka eo anoloan'ny ordinatera miandry ny tsato-kazo famantarana?
A: Ny rafitra manome ny tsato-kazo famantarana indray mandeha isan'andro amin'ny fotoana manokana. Noho izany, tamin'izany andro izany ianareo rehetra tokony hataonao dia ny topazo maso ny tabilao, fanapahan-kevitra sy ny toerana didy. Aorian'izay, dia mitaky firy ny saina, afa-tsy famindrana ny mba ho any an-Break Na dia.
Q: Tena tiako ny fomba Forex ny rafitra efa nandefa ny famantarana ny e-mail. Moa ve ny Forex Box manao ny marina toy izany?
A: Tsy misy mila izany. Tsy toy ny Forex, ny Forex Box famantarana no niteraka tamin'ny fotoana mazava indrindra.
Q: Ianao milaza fa ny rafitra miasa amin'ny 2 vola tsiroaroa. Afaka mampiasa azy io aho amin'ny tsiroaroa hafa?
A: Afaka hanandrana azy, Na izany aza ianao dia nidina ny lalana fa efa efa nanarona.
Ny sasany amin'ireo vokatra mafy orina indrindra no hita, raha ny rafitra miasa indrindra amin'ny EURUSD sy ny USDCHF tsiroaroa. Tsy ampy na dia miovaova mbola mahasoa famantarana dia nahita tamin'ny USD tsiroaroa (i.e. GBPUSD, USDJPY, etc.) Tsy manoro hevitra anao miezaka ny hampiasa ny rafitra amin'ny tsiroaroa izay tsy manana USD (i.e. CADCHF, GBPJPY, etc.).
Q: Te-hamonjy vola. No Hataoko fa manantena ny fihenam-bidy eo amin'ny milina rehefa hividy ny Informer? ary koa ny, inona no ny halehiben'ny ny tahiry ho?
A: Raha hividianana ny Informer eo anatrehan'i Aogositra 1, dia handray ny Robot toy ny fanomezana.
Q: I nahazo boky vitsivitsy rafitra avy amin'ny mpandraharaha. Ny sasany amin'izy ireo dia manana maro isan-karazany tsipika, ambaratonga, kisary, -doza / spikes sy ny vanim-potoana. Ny fitambaran'ny sary rehetra ireo singa manome famantarana amin'ny samy torohevitra sy ny output. Aza ny hevitrao fa ny lehibe kokoa ny isan'ny pamantarana, ny marina kokoa famantarana azonao?
A: Tsy mihevitra toy izany. matetika, rehefa maro no ho nivarotana tondro. Rehefa afaka izany,, fampiasana ny fitambaran'ny ambony-voalaza tondro, dia mangataka anao hahita ny famantarana amin'ny manokana. Izany no tena teny sy ny boky miresaka ny fomba ny developer entana dia kamo ary tsy miraharaha mba handraisana ny mpivarotra. Mifanohitra tanteraka, ny fikarakarana momba ny mpivarotra no mampiavaka antsika hafa rehetra afa-tsy mpandraharaha. Isika miezaka foana mba hahatonga ny vokatra tena tsotra teo ivelany – raha ny tena izy, tena tsotra, fa na dia ny mpivarotra mpanao voalohany dia afaka mora foana dikany avy amin'ireo.
Q: Tsy mbola nametraka mbola miandry Filaharana. Izany no hany zavatra izay manentsin ahy tsy mividy ny rindrambaiko. Ahoana no sarotra no?
A: Raha izany no zavatra tokana izay manentsin anao, aza manahy. Dia tena tsotra. Ny dingana manontolo-by-dingana dingana dia voafaritra ao amin'ny User ny Guide. Ho hianatra izany amin'ny momba 1 minitra.. Na izany aza, raha mahita azy somary sarotra ny mametraka ny baiko tanana, afaka mandray ny milina maimaim-poana ary afaka mametraka ny didy ho anao — zavatra izay tsy lafo anareo ariary.
Mba ataovy tsotra: mividy ny Informer teo anatrehan'ny 1 Aogositra, 2011, hizaha toetra azy ho anao sy ny porofo hoe tena mahasoa ny rafitra ary rehefa afaka ny 1 Aogositra, ianao dia hahazo ny milina tanteraka maimaim-poana ho anao.
Q: Inona avy ireo tsiroaroa ny vola izay Robot no hiasa amin'ny?
A: Izy ireo no mitovy ny Informer – EURUSD sy USDCHF
Q: Ny tolotra dia milaza fa mahazo aho ambaratonga rehetra: voalohany Price, Aza Loss ary Raiso Profit. Ny hany zavatra tsy ampy, izay Raha ny hevitro no tena zava-dehibe: dia no handray Soso-kevitra – izay lalana tokony hametraka ny filaminana. Moa ve ny rafitra mandefa famantarana - tokony manokatra mivarotra na Buy Order?
A: Eny, mazava ho azy. Talohan'ny mba misokatra, ianao manana ny ilaina REHETRA vaovao. Fepetra rehetra amin'ny fomba na rehefa hanokatra baiko dia voafaritra ao amin'ny antsipiriany bebe kokoa, ary ny famantarana dia mazava, fohy sy mora azo.
Q: Ianao milaza fa ny famantarana ny tena tonga amin'ny andro izany isan'andro I varotra. Izany ve ny tena koa manerana izao tontolo izao? Ny olona miaina ao anatin'ny fotoana samy hafa sy ny faritra afa-, mpanakalo rehetra mampiseho ny fotoana samihafa eo amin'ny terminal. Moa ve aho ho ilaina mba toa kajy rehefa no fotoana tsara indrindra mba hametraka ny baiko?
A: No, dia tsy maintsy hanao izany. Ny rafitra dia tonga dia manao kajy ny maha samy hafa ny ny terminal 'ny fotoana miaraka amin'ny fanajana ny GMT ary tonga dia mampifanaraka ny alalan'ny terminal ny fotoana. Efa niezaka izahay mba hahatonga ny rafitra rehetra tena tsotra mpivarotra. Tsy voatery handrava ny atidoha akory va fanontaniana ara-teknika.
Q: Nampiasa hafahafa aho pamantarana iray. Rehefa nametraka izany tao an-tabilao, ary nijery ny tantara, dia rehetra dia mazava sy tsotra aho fa nanontany tena ny fomba mahatalanjona toy izany tonga mpanondro dia azo maimaim-poana? Dia Niezaka ny varotra izany miorina eo amin'ny famantarana, fa izany dia hanova azy ireo foana. Vao fotoana fohy lasa izay dia nampiseho Open Buy. Nataoko fa, fa raha vao nataoko izany, izany dia maneho hatrany Sell.
Tsy izaho no sendra ny tena olana mitovy amin'ny tondro? Moa ve ny vokatra miovaova foana?
A: Izay voalaza dia antsoina hoe Repainting. Indrisy, ny ankamaroan'ny ny tondro eny an-tsena no "repaint". Na izany aza, dia tsy nahita olana amin 'ny tondro.
Izy ireo dia mafy orina toy ny vatolampy!
Q: Ho vokatra izany koa ny lany daty toy ny teo aloha ny entana rehetra?
A: Eny. Raha vao ny vokatra mampahafantatra anao fa Izaho efa lany daty, azafady Mitete antsika tsipika ary mandefa avy hatrany Ho anao ny manam-petra dikan. Izany Miaro antsika tsy tsindraindray maty eritreritra mpanjifa, izay manararaotra ny 30 andro miverina politika, ary rehefa avy nahazo feno refund, foana hampiasa ny vokatra.
Q: Firy no azoko tantara mampiasa ny vokatra amin'ny?
A: Azonao atao ny mampiasa izany indray (1) velona sy 5 Demo kaonty. Raha tianao ny hampiasa ny vokatra eo amin'ny isan'ny kokoa kaonty, dia mifandraisa ny fanohanantsika, ary ianao ekipa mandray fanampiny fihenam-bidy ho an'ny fividianana indray dika mitovy ny rindrambaiko.
Q: Izay Aza Loss sy Raiso aho Profit tokony mametraka?
A: Raiso no soa fixated foana ary natao voafaritra ao amin'ny User ny Guide. Stop Loss ho soso-kevitra noho ny famantarana.
Q: Ny tena no manantena mba hampitombo ny petra-bola amin'ny tokony ho iray volana, mampiasa ny sofware?
A: Izany dia miankina amin'ny ny habetsaky ny ny petra-bola voalohany, mikasika ny fomba mampidi-doza ny varotra sy ny fomba dia, mazava ho azy, eny an-tsena ihany. Tsena eto amin'ity toe-javatra sarotra ny mialoha. Izany dia midika hoe tsy isan'andro faritra Euro mahatsapa shockwaves ara-toekarena sy ny Unites States dia am-dalam-pisaraham-ara-teknika toerana misy anao. Na dia izany aza, Mino mafy isika fa afaka hanatsara ny rafitra ny kaontinao amin'ny alalan'ny araka izay 50% isam-bolana raha varotra conservatively.
tena zava-dehibe- hizaha toetra foana ny rafitra anao kaonty fihetsiketsehana voalohany. Tao anatin'ny vanim-potoana iray volana ny fitsarana dia manolotra, ianao hanangana ny heviny momba ny fahamarinan-toerana sy ny rafitra profitability. koa, dia hanatsoaka hevitra raha ny rafitra, sady koa anie, dia ho anao sy ny zavatra ilaina tiany. Rehefa afaka izany,, dia afaka soa aman-tsara ianao manomboka varotra amin'ny Live kaonty.
Q: Iza no rafitra mpanakalo tena mifanaraka amin'ny?
A: Azonao atao ny mampiasa ny broker amin'ny fisainana mazava. Ny tena zava-dehibe dia ny manana ny broker MetaTrader4 fampiasana rafitra, satria Forex Blue Box miasa fotsiny ao anatin'ny izany tontolo iainana.
Q: Efa saika nahazo ny entana rehetra. Misy miasa vokatra tsara ho ahy, ny hafa dia tsy dia lehibe. Na izany aza, Te-hisaotra anao noho ny fandraisana anjara tamin'ny dingana fanabeazana. Noho ny mailaka, Aho ho za-draharaha kokoa, mahay ary, tena zava-dehibe, nihatony.
Afaka ataoko amin'ny misy karazana fihenam-bidy tahaka ny hatsaram-panahinao feno mpanjifa?
A: Voalohany, Misaotra indrindra anao. Isika tsy mivadika tena manome lanja ny mpanjifa sy hanolotra azy ireo foana ny sasany amin'ireo tsara indrindra safidy fividianana. Mazava ho azy, ianao hahazo fihenam-bidy. Ny antsipirihany sy ny toe-piainana sasany dia voalaza any an-kafa any amin'ny toerana.
Tohizo toy ny mpanjifa, ary manolotra antsika ny fanamarihana. Manampy antsika be eo amin'ny fampandrosoana.
Q: Inona no kely indrindra petra-bola ilaina mba hanomboka hampiasa ny rafitra?
A: Ny petra-bola ny $300 dia takiana hiasa amin'ny fitsipika maro (avy amin'ny 0.1). Na izany aza, raha ny petra-bola dia tsy, afaka usilize microlots. Mba hahazoana fanazavana momba ny microlots, dia mifandraisa ny broker.
Q: Nanoratra ianao fa ny rafitra azo ampiasaina miaraka ny Trailingator. Inona no atao? koa, dia mahazo fihenam-bidy raha mividy Trailingator miaraka amin'ny Forex Blue Box?
A: Amin'izao vinavina, ny varotra mampiasa ny profitability ny Trailingator mitombo amin'ny alalan'ny about 20-25%. mazava ho, ianao hahazo fihenam-bidy rehefa hividy ny Trailingator.